Step 01. စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လက်ခံပါ
Home ပါဝင်ခြင်း အဆငျ့ 01. အသုံးပွုမှုဆိုငျရာ စညျးမဉြျးသတျမှတျခကြျမြား
အောက်ပါ သဘောတူညီချက်ကို စစ်ဆေးကြည့်ပြီးနောက် အချက်တစ်ချက်စီကို တစ်ခုချင်း သင်သဘောတူနိုင်ပါသည်။ အားလုံးကို သဘောတူချိန်တွင် မှတ်သားထားသည့် အချက်များမှာ ချန်ထားနိုင်သော အချက်များ ဖြစ်သည်။
LOTTE HOTELS & RESORTS (ဤမှနောင်တွင် "ကုမ္ပဏီ” ဟု ရည်ညွှန်းသည့်) သည် LOTTE HOTEL ဆုချီးမြှင့်မှုများ အဖွဲ့ဝင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို စုဆောင်း၊ အသုံးပြုပြီး ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
LOTTE Hotel ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (လိုအပ်သည့် အကွက်များ)
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားသုံးစြဲမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ (လိုအပ်သည့် အကွက်များ)
ပြင်ပလူပုဂ္ဂိုလ်များ - ပြည်တွင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းတွင်းရှိ နိုင်ငံတကာ ဟိုတယ်များဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပြဠာန်းချက် (လိုအပ်သည့် အကွက်များ)
- Local and international hotels of the company’s chain (http://www.LOTTEhotel.com/global/my/hotel-finder.html)
ပြည်ပသို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ - ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းတွင်းရှိ နိုင်ငံတကာ ဟိုတယ်များ (လိုအပ်သည့် အကွက်များ)
ပြင်ပလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပြဠာန်းချက် (လုပ်မလုပ် ရွေးချယ်နိုင်သည်)
ပြင်ပလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပြဠာန်းချက်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုမှုအပြင် ကုန်ပစ္စည်း ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ လက်ခံရရှိမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (လုပ်မလုပ် ရွေးချယ်နိုင်သည်)
SMS E-mail *ဖော်ပြထားသည့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး အချက်အလက်များကို လက်ခံရရှိရန် တူညီသော ချန်နယ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုမှုအပြင် ကုန်ပစ္စည်း ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ လက်ခံရရှိမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို တတိယမြောက် ပါတီများထံ ပေးပို့ရန်နှင့် ကုန်ပစ္စည်း ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ လက်ခံရရှိရန် သဘောတူညီချက် (လုပ်မလုပ် ရွေးချယ်နိုင်သည်)
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို တတိယမြောက် ပါတီများထံ ပေးပို့ရန်နှင့် ကုန်ပစ္စည်း ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ လက်ခံရရှိရန် သဘောတူညီချက်
- Local and international chain hotels of LOTTE Hotels (https://www.lottehotel.com/global/my/hotel-finder.html)